Maalinta: Oktoobar 13, 2017
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, oo sii wadata shaqadeeda adeegyo gaadiid oo dadweynaha ka sahlan oo raaxo leh, waxay kordhisay tirada gawaarida iyo duulimaadyada CE4, CE2, E8 iyo AZ oo si ballaaran looga isticmaalo bartamaha magaalada. Diyarbakir [More ...]
SAMULAS ayaa xayeysiisay gawaarida 'Air Transportation'
Si loo kala saaro maal-gashiga gaadiidka iyo gacan ka geysashada horumarinta magaalada, SAMULAŞ wuxuu bilaabay daraasaadka suurtagalka ah ee suurtagalka ah ee gaadiidka Gaadiidka Gobolka Hav oo ujeedkiisu yahay meelo aan lahayn duulimaad toos ah oo ka timaada Samsun ilaa gudaha iyo dibedda. [More ...]
Isi Logistics Village ka Jawaab ka yimid Cakir
Shirka Golaha Dawlada Hoose ee Magaaladda Samsun, 'Logistic Village' iyadoo laga jawaabayo su’aal ku saabsan jawaabihii ka soo baxay Jawaab kuxigeenka Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Duqa Magaalada Turan Cakir, “1-2 dadku’ waxay noo tahay kibis ka soo baxday fikirka ganacsigan. [More ...]
Ka hor inta Gebze laga sii daayo Subway ilaa Izmit
Kulankii Oktoobar ee Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxaa lagu qabtay gudoomiye kuxigeenka Zekeriya Özak maxaa yeelay İbrahim Karaosmanoğlu wuxuu ku sugnaa meel ka baxsan gobolka. Kulanku, ajandaha 113 ayaa laga wada hadlay oo la go’aamiyey. Gudoomiyaha Gobolka CHP Cengiz Sarıbay, Gobolka [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka Samsun waxay sanadkasta ku rakibantahay 130 kun oo TL dakhli tamar sanadle ah oo ka timaada tamarta qoraxda ee lagu rakibay saqafka dhismaha tareenka. Dawlada Hoose ee Magaalaga caasimada waxay diirada saareysaa tamarta la cusbooneysiin karo [More ...]
Nurettin Konyalıoğlu oo ah 30-sano jir ah ayaa isdilay isaga oo ku booday tareenka u dhexeeya stopsZBAN ee Running iyo İnkilap istaaga, kaas oo meel muhiim ah ku leh gaadiidka İzmir. Waxay ka dhacday meel u dhow mitirka 100 ee RunZBAN Running Station. Safarka Seljuk-Aliaga [More ...]
14-22 waxaa qaban doona Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri inta u dhaxeysa Oktoobar iyo Oktoobar. Carwada Buugaagta Kayseri, buugaagta ayaa loo qaybiyay muwaadiniinta taramikada. Mustafa Çelik, Duqa Magaalada metropolitan, wuxuu ku dhacay wadada tareenka. [More ...]
Marxaladda labaad waxay ka bilaabataa Akkaray
2 tareenka Akçaray oo lagu dhammeeyay Izmit. Hawsha jilicsan ee masraxa ayaa bilaabatay. Iyaga oo bixinaya macluumaad ku saabsan mashruuca, xoghayihii guud 'Elhan Bayram wuxuu yidhi "Tram wuxuu aadi doonaa xarunta Kuruçeşme Kocaeli Kocaeli ee Magaalo-Weyne October [More ...]
RayHaber 13.10.2017 Warbixinta Shirka
Kusoo celinta Shaqada Gawaarida Naafada (TÜLOMSAŞ) Ka Gudubka Heerarka Ilaalinta ee Adeegga Ilaaliyaha
Warshadaha Erzurumlu waxay doonayaan Tareen
Erzurum 2. Maalgashadayaasha Aagga Wershadaha abaabulan, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Erzurum (ETSO) ayaa isugu yimid shirkii wada tashiga labaad. Kulankan waxaa lagu abaabulay isuduwidda agaasimaha gobolka OIZ Fırat Karakaya, madaxweynaha Golaha ETSO [More ...]
Maareeyaha Gaadiidka Gaadiidka TCDD ETSO, BTK Booqo
Gaadiidka TCDD Inc., Sivas iyo Erzurum ee Xarumaha Saadka, Mashruuca Tareenka Baku-Tbilisi-Kars (BTK) sababtuna tahay dhamaadka, waxay bilaabeen inay shaqeeyaan si ay u sharxaan faa'iidooyinka gaadiidka tareenka adduunka ganacsiga. Wadooyinka Tareenka ee Gobolka Sivas iyo [More ...]
Wasiirka arimaha dibada ee dalka 'Ganaaxii foosha ayaa kor loo qaaday'
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa ka sheegay kulanka uu la qaatay Wasiirka Badaha Griigga Panagiotis Kouroumplis, “Wadahadalka wuxuu ahaa mid wanaagsan. Laba arrimood baa jira. Mid ayaa ahaa bal in rakaab rakaab ah uu shaqeynayo laga bilaabo maanta. laba [More ...]
Thanks to Cankesen ee Magdhawga Duulimaadka
Ünsal Yıldırım, Gudoomiyaha Ankara 2 Laanta iyo Agaasinka Guud ee DHMİ ayaa booqday Can Cankesen. Heshiiska wadajirka ah ee Sarkaalka Gaadiidka-Sen [More ...]
Si kor loogu qaado tayada tamarta, la kulanto baahida korantada loona abuuro khadad kale oo bixitaan ah, tirada iyo muddada bixitaanku wuu yaraaday. Maalgalinta SEDAŞ, “Waa loo joogteyn karaa macaamiisha 'aamin, tayo, koronto la isku halleyn karo [More ...]